Adrafinil Vs Modafinil, Iza no Misy Anao?
3. Adimfinil a Stimulant?
samy Adrafinil ary Modafinil dia mahasalama nootropics ho fampiroboroboana ny asan'ny cognitive. Ireo eugero roa ireo dia mampitombo ny herin'ny atidoha ary mampiroborobo ny fahatsapana. Noho izany dia afaka ny ho safidy lehibe izy ireo raha toa ka matory loatra ianao, kanefa tsy maintsy miasa amin'ny alin'ny alin'ny sigara.
Ny kafafa, amphetamines, ary ny fitsaboana mifandraika dia mifantoka foana ny rafitra rafitra sy ny fiasa ara-batana manontolo. Na izany aza, ny adrafinil sy ny modafinil dia hampitombo ny taova ny taova.
Ny fihetsika tsy mitongilana amin'ny atidoha dia matetika maharitra. Mampitombo ny fahamalinana izy ireo nefa tsy miteraka vokatra mivaingana toy ny hafanana, fisavoritahana, na fahaverezana. Azo antoka fa tsara ny fampidirana fanafody ny aretin-koditra sy ny aretina mifandray amin'ny torimaso.
Noho izany, inona ny hatezerana momba izany adrafinil vs modafinil? Andao hojerentsika.
Tantaran'i Adrafinil vs Modafinil
Adrafinil dia hita voalohany tany Frantsa tao amin'ny 1974 avy amin'ny Lafon Pharmaceuticals izay nahitana ny tranga iray noho ny niasa ireo manam-pahaizana mba hanangona fanafody. Ity orinasa ity dia niara-niasa tamin'ilay mpikaroka torimaso malaza, Michel Jouvet, mba hizaha ny anjara toeran'ilay fitambaram-pahaizana amin'ny fitsaboana ara-pahasalamana sy ny fahasalaman'ny neurolojia.
Ao amin'ny 1984, Lafon Pharmaceuticals dia namoaka adrafinil tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny tsena Frantsay. Nosoratana tatỳ aoriana ny zava-mahadomelina ho toy ny fitsaboana aretin-koditra ao 1985. Efatra taona taty aoriana, ny votoaty dia ny fahatezerana rehetra tany Etazonia sy ny tany manontolo.
Tao amin'ny 1976, dia hita fa misy mpitsabo mafana fo Lafon adrafinil, izay tompon'andraikitra amin'ny vokatra adrafinil. Nanamafy ny manam-pahaizana fa ny metabolita no ampiasaina. Adrafinil dia lozisialy, izay tsy maintsy ampidirin'ny atiny voalohany amin'ny modafinil.
Ireo mpikaroka Lafon dia nanao ny asa fitoriana mba hisarihana ny metabolita mavitrika. Taorian'ny fisaraham-bazana nahomby, dia nahitana fanafody modafinil ny vondrona. Voaro kokoa ilay fitambarana, ary navoaka ny vokatra haingana noho ny teo aloha. Avy amin'i 1994, nanamafy izany ny manampahefana Frantsay.
Ao amin'ny 1998, ny modafinil dia nahazo ny fankatoavan'ny FDA ho zava-mahadomelina. Dimy taona taty aoriana, ny fanafody dia nasiana ho an'ny mararin'ny homeromnia isan'andro, izay mifandraika amin'ny apnea tsy mataho-doko sy ny olona miaraka amin'ny aretim-pandrefesana amin'ny asa fandidiana.
Tao amin'ny 2001, Cephalon Inc., orinasa mpanamboatra pharmaceutique Amerikana, dia nividy laboratoire Lafon $ 450 tapitrisa. Roa taona taty aoriana, ity orinasa ity dia nanakana ny famokarana adrafinil raha nanaisotra ny fahazoan-dàlana ny FDA.
Ny adrafinil roah dia fikambanana miaraka amin'ny laharana CAS 63547-13-7 raha modafinil dia aseho amin'ny 68693-11-8.
Brand Name an'i Adrafinil vs Modafinil
Laboratoire Lafon dia nivarotra ny poofa adrafinil tamin'ny voalohany, antsoina hoe Olmifon.
Modafinil dia mivarotra ny Provigil®. Anaran-tserasera hafa manana fitaovam-panafody;
Eny! Adrafinil dia fampandrosoana. Ity lafiny iray ity dia mety ny antony mahatonga ireo masoivohom-pitsangatsanganana amin'ny fanatanjahantena. The zava-mahadomelina dia manandratra ny rafi-pitabatabana amin'ny lafiny roa. Voalohany, mampitony ny hatairana. Faharoa, manatsara ny fahamailoana izany.
Tsy toy ny fitsaboana hafa izay manentana ny fandrindrana ny môtera, ny adrafinil dia solon-tsakafo fotsiny. Noho izany, ny rongony dia tsy mahatonga ny fahatsapana fihenanam-po na ny tsy fisakanana.
Adrafinil vs Modafinil: Inona avy ireo fitoviana?
Samy miasa avokoa ny adrafinil sy modafinil. Noho izany, ireo tsy mitongilana roa ireo dia mampiseho fiantraikany sy tombontsoa mitovy amin'izany. Rehefa misy fanindroany, dia mitranga amin'ny aty ny metabolisma. Adrafinil dia niova ho modafinil ho metabolita mavitrika.
Ireo nootropik roa dia mifantoka amin'ny neurons hypothalamic sy amygdala, izay manitsy ny famokarana ny fihatsarambelon'ny ati-doha. Ny ADRAfinil sy modafinil dia mampiakatra ny halavan'ny histamine sy ny norepinephrine. Ireo fihetsika ireo dia tsy vitan'ny hoe manala ny fahamalinana sy ny fifantohana tanteraka, fa ny fahatsapana ihany koa.
Ankoatra izany, mampitombo ny fahafahana ny neurone glutamate. Mampitombo ny fahatsiarovan-tena io mpandala ny neurotranserera io ary manatsara ny asan'ny kognita amin'ny ankapobeny.
Adrafinil sy modafinil koa dia miasa mba hampitombo ny halavan'ny dopamine ao amin'ny atidoha. Ny fanalefahana nentim-paharazana dia tsy hanaisotra ny famotsorana ny dopamine. Na izany aza, ny fitsaboana ny eugeroïque dia hijoro amin'ny làlam-pandrefesana neurotera, izay mety ho fandosiran'io neurotransmitter lehibe io. Ny rafitra dopaminergika dia mampitony ny fahamalinana ary manandratra ny toe-tsaina.
Na dia mahomby tsara amin'ny fampivoarana ny fiasan'ny atidoha aza ireo fanafody roa ireo, ny modafinil dia mahery kokoa noho ny adrafinil.
Noforonina ho fanafody ny arcolepsy sy ny fifehezana ny tsy fahampian-tsakafo sy tsy ara-dalàna mandritra ny torimaso ireo eokeroika ireo. Na dia izany aza, maro ireo fikarohana sy fitsapana momba ny fitsaboana no manohana fa ny fampidirana zava-mahadomelina dia mampitombo ny fahatsapana hafanana ary mampitombo ny hatsembohana. Ankoatr'izany, dia mampiseho ny toetra voajanahary izy ireo, noho izany, mitana toerana lehibe eo amin'ny fahasalaman'ny saina.
Adrafinil sy modafinil dia fanokafana-fampiroboroboana mpiasa. Raha toa ka mpianatra manana fanadinana mivaingana mialoha ianao, dia azonao atao ny mampiasa ny zava-mahadomelina ho toy ny harena azo antoka amin'ny menaka mamatonalina. Manamaivana herim-po, reraka, ary tebiteby izy ireo amin'ny fanamafisana ny fahamalinana.
Ny vokatry ny Adrafinil dia mety haharitra hatramin'ny 15 ora alohan'ny hisakafo. Ny sasany amin'ireo mpanamory fiaramanidina Frantsay dia mandray izany ho toy ny fepetra mifanohitra amin'ny trangam-pitsarana. Ankoatra izany, mampiasa pilina enti-manentana ny manamboninahitra miaramila, ny mpamily ary ny mpampiasa azy mba hanampy azy ireo ho mailo sy hiaritra ny fahantrana. Ao Frantsa, Etazonia sy Angletera, ny tompon'andraikitra ara-miaramila dia mandray modafinil ho solon'ny amphetamines, indrindra rehefa manao asa fitoriana lava.
Na dia mitazona ny firotsahan'ny torimaso aza ny fanamafisana ny cognitive; Tsy ho tratran'ny dipoavatra mahery vaika mihitsy ianao, raha oharina amin'ny mpanentana hafa.
Raha ny mikasika ny asan'ny atidoha, ireny eugero roa ireny dia solon-danja amin'ny fanatsarana ny fahaiza-manaon'izy ireo. Ohatra, izy ireo dia manatsara ny fahatsiarovan-tena sy ny fahombiazan'ny mpampiasa, indrindra amin'ny toe-javatra izay mitaky ny fisainana mitsikera.
Adrafinil sy modafinil dia mampitombo ny fitomboan'ny histamine, dopamine, ary ny norepinephrine. Ireo taratra mpikirakira telo dia mitarika amin'ny fitomboan'ny angovo ara-batana. Noho izany, ny zava-mahadomelina dia ampahany amin'ny famenoana ireo atleta mavitrika izay manao fanatanjahan-tena mafy. Mariho fa ireo tsy mitongilana roa ireo dia voarara tanteraka amin'ny fanatanjahantena fifaninanana.
Ny tsikombakomba amin'ny adrafinil amazon reviews dia manamarina fa ny pneolezy dia afaka mitantana tsara ny ADHD, ny aretina miteraka fatetika, ary ny fahaketrahana. Ankoatra izany, ny fianarana vao haingana dia manombana fa ny poofa modafinil dia manampy ireo mpidoroka kôkainina hiady amin'ny fiankinan-doha.
Adrafinil vs Modafinil: WHat Are The DifferenCES?
Tsy mora ny mametraka ny fahasamihafana eo amin'ireo roa ireo satria ny vokatra dia iray ihany. Na izany aza, tokony marihinao fa ny adrafinil dia lozisialy. Zava-bita tsy mavitrika izy io, izay tsy maintsy mandalo amin'ny aty noho ny metabolisma alohan'ny ahafahany manome ny soa ho an'ny neurologique.
Modafinil dia manana hery lehibe kokoa noho ny adrafinil. Noho izany, mila mandefa dosage adrafinil ianao raha mitady valiny miavaka. Tsy ny zava-mahadomelina madinidinika rehetra dia hivadika tanteraka ao amin'ny modafinil raha toa ka mahazatra ny metabolisma ao amin'ny aty. Noho izany antony izany dia tsy maintsy mamorona ny endrika tsy misy dikany ianao amin'ny fametrahana dipoavatra ambony.
Ny dodea modafinil isan'andro dia manelanelana ny 100mg sy 200mg. Na dia izany aza, misy olona sasany dia miakatra amin'ny 400mg ao anatin'ny andro iray.
Ho an'ny adrafinil, ny dosage mahazatra dia eo anelanelan'ny 300mg sy 600mg. Ny mpampiasa mahery fo dia hanitatra ny dosie amin'ny 1200mg. Ho an'ny mpanjifany iray, dia tsara ny ampiasanao ny habetsaky ny zava-mahadomelina mandra-pahazoanao antoka fa ny vatanao dia afaka mandefitra avo lenta.
Ny habetsaky ny ampahany amin'ny lanjan'ny vatanao. Ohatra, ny dokotera sy ny mpanome ara-pahasalamana dia manoro ny 10mg amin'ny zava-mahadomelina ho kilao. Amin'ity tranga ity, raha mandanjalanja 90kg ianao dia mila mampiasa 900mg amin'ny adrafinil.
Ireo fanatsarana kognitive ireo dia azo atao ao anaty vovo, kapsule, na takelaka takelaka. Koa satria manana fahalalahana avo lenta izy ireo, dia afaka mitondra azy ireo amin'ny rano na ny sira, indrindra amin'ny vavan'ny voary. Ny sakafo matsiro dia mety hanelingelina ny rafitry ny asa. Raha sendra fanafody ny arcolepsy na aretina mifandray amin'ny torimaso, dia tokony manaraka ny torolalan'ny dokotera ianao.
Ny vokatra Adrafinil sy modafinil dia mety maharitra eo anelanelan'ny 12 sy 15 ora. Noho izany, tokony handray ny fanampiana vao maraina ianao mba tsy hanelingelina ny dian-tongotra mahazatra.
Na izany aza, raha toa ianao ka mahaliana momba ny tombontsoa tsy mitongilana, dia tokony hampiasa azy ireny indraindray ianao. Ohatra, raiso ny adrafinil raha tsy miasa mandritra ny ora fanampiny mba handresy fe-potoana henjana na hiasa alina.
Andao isika hampitaha adrafinil vs modafinil. Noho izany, iza no manimba zavatra kokoa noho ny iray hafa? Avelao aho handefa izany ho anao.
Adrafinil dia manana metabolisma voalohany amin'ny atiny rehefa miverina amin'ny modafinil. Vokatr'izany dia mety handratra ity taova ity ny zava-mahadomelina, ka hitarika ny hepatoxicity. Amin'ny tranga sasany, io nootropic dia tompon'andraikitra amin'ny fitomboan'ny enzymes ny atiny.
Eny ary, aza manao tebiteby satria ny tosi-dran'ny tsiranoka dia tsy fahita firy. Raha mitantana fotsiny ianao adrafinil powder Ho an'ny fotoana maharitra, tsy ho latsa-paka amin'io fiakarana ratsy io ianao.
Alohan'ny handehanany ao amin'ny rafi-pitantanana ny neurolojia, ny adrafinil dia tokony hosoloina amin'ny aty. Noho izany, ny fihetsika amin'ny zava-mahadomelina ao amin'ny vatana dia mety ho marefo. Io fanafody entin-tsaina io dia hiditra ao anatin'ny fivezivezena ao anatin'ny telo ka hatramin'ny dimy ora.
Modafinil dia mihetsika haingana, satria tsy mila metabolism na fiovam-po izany. Haka eo anelanelan'ny 60 sy 90 minitra izy io mba tsy hahitanao ny haavony.
Modafinil dia manana ny antsasaky ny ora 14. Ny mifanohitra amin'izany, ny adrafinil eo amin'ny rafitry ny olombelona mandritra ny ora iray na roa alohan'ny hovana ho lasa zavatra mahomby. Ny antsasaky ny fiainana dia manodidina ny 15 hatramin'ny ora 16.
Ho an'ny adrafinil sy modafinil, ny hany tokana azo antoka hilazana azy ireo manokana dia ny fanagadrana ny heriny. Na izany aza, ny fisarahana tsy an-dry zareo dia ny maha-ara-drariny azy ireo.
Tsy toy ny modafinil, ny adrafinil dia tsy voafehy ao amin'ny ankamaroan'ny fanjakana. Tsy mila dokotera marina ianao raha te hahazo izany. Ny fanekena io fanafody entin-tsaina io dia mora toy ny manipy baolina eo amin'ny mpivarotra kiraro.
Ny mifanohitra amin'izany, ny vovobony modafinil dia vatana mifehy ao Etazonia, fanjakana eoropeanina, Kanada, Shina, Japon ary Aostralia. Mila dokotera manan-kery ianao avy amin'ny dokotera voamarina ho anao hahazo ny zava-mahadomelina. Ny firenena hafa toa an'i Meksika, Angletera, Finlandy ary Soedoà dia tsy voatanisa ao amin'ny modafinil ho toy ny vatana mifehy, fa mbola ilaina ny prescription.
Ny fampiasana ny adrafinil na modafinil dia tsy ara-dalàna amin'ny kianja ara-panatanjahantena. Avy amin'ny 2004, ny masoivohon'ny World Anti-Doping dia nanolotra ny fampiasana azy ao anatin'ny atleta na fifaninanana.
Modafinil dia lafo be. Na izany aza, ny vola lany amin'ny mpivarotra. Ny vidin'ny adrafinil dia ampahany amin'ny modafinil.
Raha miresaka momba ny saram-pandaharana aho, dia mety manontany anao aho aiza no hividianana adrafinil, sa tsy izany? Raha mitady fifanarahana tanteraka ianao, andramo miaraka aminay ary mankafy ny taham-pivarotana.
Ny adrafinil sy ny modafinil dia samy manana ny vokany hafa. Na izany aza, ny voalohany dia mety ho tena misy poizina amin'ny aty, indrindra amin'ny fampiasana maharitra.
Ny fiantraikan'ny adrafinil sy modafinil, ohatra, dia ny aretin'andoha, ny tosidra, ny fiovan'ny fo, ary ny fikorontanan'ny tosidra. Mety hampihena ny fatran'ny urine ny fakana dosie avo lenta. Ankoatr'izany, mety ho voan'ny androbe sy ny tsy fahampian-tsakafo ny dosage maharitra.
Ny fanamarinana vetivety momba ny fanadihadiana adrafinil dia manamafy fa ny fanafarana koa dia manakana ny fialan-tsiny. Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia mitatitra fa mahalana izy ireo no mahatsiaro noana raha ny zava-mahadomelina. Ny vokatr'izany dia mety ho fitahiana amin'ny fanovàna, indrindra ho an'ny olona izay te handratra ny lanjan'ny vatana hafa.
Raha toa ianao ka tsy mandray ara-potoana ara-potoana, dia mety hiady amin'ny tsy fahitan-tory ianao. Hatramin'ny vanim-potoana henjana dia mahatratra hatramin'ny ora 15 ianao, dia voatery ny mifoha maraina aloha vao mandray ny zava-mahadomelina. Ny tsy fahombiazanao hanaraka ity fandaharam-potoana ity dia hijaly noho ny faharetan'ny fahatongavanao.
Adrafinil vs Modafinil: Iza aminareo no mahasoa anao?
Ny pilule mahazatra indrindra dia miankina amin'ny toe-javatra iainanao, ny zavatra tadiavinao ao amin'ny maso tsy mitongilana, ary ny fomba fiainanao. Ny zava-mahadomelina tsirairay dia tsy mahomby. Raiso, ohatra, adrafinil powder dia ara-dalàna any amin'ny ankamaroan'ny fanjakana, saingy misy ny antsasa-manila lava ary mety handrodana ny atiny. Etsy ankilany, mila mahazo prescription manan-kery ny mividy modafinil. Na izany aza, mihetsika haingana ny zava-mahadomelina ary tena mahavariana.
Modafinil dia tena mahery, ary hamoaka ny vokany ao anatin'ny fotoana fohy. Ankoatra izany, dia tsy misy vokany toaka eo amin'ny aty. Na izany aza, tokony handray izany ianao raha efa notakian'ny dokotera izany.
Ny tombony miavaka amin'ny modafinil dia ny antsasaky ny androm-piainany. Noho izany, ny fandaminana ny doses dia mora toy ny isa telo. Raha manao izany ianao, dia tsy dia mety hanelingelina ny modelinao torimaso ara-potoana na ny rhythm caddy ianao.
Raha mijery amin'ny votoatin'ny wiki adrafinil ianao, dia ho hitanao fa tsy azo lavina fa safidy miavaka ho an'ny mpampiasa hafa rehetra izany. Avelao aho hanazava. Ity fitsaboana mahomby ity dia tsy voafehy any amin'ny firenena maromaro. Vokatr'izany, ny ankamaroan'ny manampahefana dia tsy hanome vintana raha efa nividy azy na tsy misy prescription. Noho izany, raha mikendry ny tombontsoa tsy mitongilana ianao raha oharina amin'ny fitantanana ny tsy fandriam-pahalemana, dia ny adrafinil no lalana handehanana.
Ny zava-mahadomelina koa dia mahomby. Tsy mila manapaka ny banky ianao, ary mety tsy hila antoka amin'ny fiantohana mihitsy aza ny ampahany amin'ny vidiny.
Adrafinil Vs Modafinil Famaranana
Ireo adrafinil sy modafinil ireo dia azo antoka, azo ekena ary mahomby amin'ny mpampiasa. Na dia toa mitovy aza izy ireo, ny modafinil dia tsara raha manoro hevitra azy ny dokotera.
Na izany aza, raha te hanararaotra ny tombotsoa nootropic ny eugeroic, adrafinil no loharanom-baovao lehibe indrindra. Azo alaina ara-dalàna amin'ny alàlan'ny didy amam-pitsipika izy io ary azo alaina ho fanampiny fanampiny. Na dia tsara kokoa aza ny fanamarihana adrafinil, dia tokony hitandrina amin'ny lalàna momba ny zava-mahadomelina sy ny vokany ianao.
Na miasa ny fiovan'ny fasana ianao na mijanona ao amin'ny birao noho ny andraikitra lehibe, ny adrafinil dia hanova anao ho toy ny vorondolo. Raha mianatra amin'ny fitsapana ianao, dia tsy hampivelatra ny fahaizanao manam-pahaizana fotsiny ny zava-mahadomelina mahay fa hampitombo ny fahatsiarovanao.
To bypass the adrafinil, ataovy izay hahazoana ny fanafody mandritra ny fotoana fohy. Amin'ny herinandro, tokony tsy mihoatra ny telo andro ianao.